काभ्रेको चौंरीदेउरालीमा भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण, खुशी भए किसान | नमोबुद्ध न्युज
ब्रेकिङ समाचारकाभ्रेको चौंरीदेउरालीमा भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण, खुशी भए किसान
काभ्रेको चौंरीदेउरालीमा भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण, खुशी भए किसान
काठमाडौ–काभ्रे जिल्लाको चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा किसानहरुलाई ‘भैंसी सुत्केरी भत्ता’ वितरण गर्न थालेको छ । ‘किसानसँग गाउँपालिका’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले भैंसी पालक किसानहरुालई भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गर्न थालेको हो ।
शुक्रबार चौंरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. ६ र ८ मा भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको छ । सुत्केरी भएपछि प्रत्येक भंैसीले १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ ।
भत्ता वितरण गर्नेक्रममा आज वडा नं. ६ का ८० जना किसानलाई भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको छ । भत्ता वितरण कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारकुमारी चौंलागाईं, वडा अध्यक्ष रेशम चौंलागाईं, प्राविधिक सल्लाहकार अञ्जीत गौतम लगायतका सहभागीता रहेका थिए ।
त्यसैगरि वडा नं. ८ मा आज ३४ जना भैंसीपालक किसानहरुले भैंसी सुत्केरी भत्ता पाएका छन् । ‘किसानसँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप भैंसी सुत्केरी भत्ता आज ३४ जना किसानलाई वितरण गरेका छौं ।’ वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष धनबहादुर तामाङले भने, ‘भैंसी सुत्केरी भत्ता प्रति किसान १५ सयका दरले वितरण गरेको छौं ।’
यस अघि वडा नं. ५ का १ सय ८० किसानहरुलाई भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गसिकेको छ ।
किसानलाई सहयोगको लागि भैंसीपालक किसान घुम्ती कोष
वडा नं. ८ मा किसानहरुलाई भैंसी किन्न सहयोग पुगोस भनेर भंैसीपालक किसान घुम्ती कोष स्थापना समेत गरेको छ । वडा अध्यक्ष तामाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मै वडाले ५ लाख रुपैयाँको उक्त कोष खडा गरेका थिए । सो कोष मार्फत यस वडाका भैंसीपालक किसानले ६ देखि ८ महिनाको लागि भैंसी किन्न आधा रकम निव्याजी ऋण पाउने गरेको उनले बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मै हामीले ५ लाख रुपैयाँको भैंसीपालक किसान घुम्ती कोष खडा गरेको थियौं । यस कोषबाटै भैंसीको १ लाख बराबर निःशुल्क वीमा गरेका थियौं ।’ वडा अध्यक्ष तामाङले भने, ‘सोही कोष मार्पmत भैंसी किन्न निव्र्याजीमा ऋण दिने गरेका छौं । विपन्न किसानलाई कोषबाट ५० प्रतिशत निव्याजी ऋण प्रदान गर्छौं । सो ऋणको अबधि ६ देखि ८ महिना हुनेछ ।’
सो रकम किसानबाट दूध बेच्ने दूध डेरी मार्फत सो रकम मासिक रुपमा घुम्ती कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्राब्धन राखेको छ । किसानको आवश्यकता माग अनुसार सो रकम अन्य किसानलाई दिने गरेको बताउँदै तामाङले घुम्ती कोष मार्फत किसानले ३५ हजार रुपैयाँ देखि ५५ हजार रुपैयाँ सम्म निव्र्याजी ऋण पाउने गरेको जानकारी दिए ।
यसैबीच सो कोषमा चालु आर्थिक वर्षमा वडाले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप गरेको वडा अध्यक्ष तामाङले बताए । उनका अनुसार हालसम्ममा सो वडाका १३ जना किसानहरु भैंसीपालक घुम्ती कोषबाट लाभान्वीत भएका छन् ।
भैंसी पालक किसानहरुलाई भैंसी सुत्केरी भत्ता र भैंसी पालक घुम्ती कोष मार्फत सेवा पाउँदा खुशी भएका छन् । किसानसँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत किसानले भैंसी सुत्केरी भएको १५ दिन भित्रमा गाउँपालिकामा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले जानकारी दिए । किसानसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सबै वडामा सञ्चालन भइरहेको छ ।